Ukudweba chamber: ngezandla zakho (izibalo)
Car upende noma ifenisha luyindida kakhulu futhi inqubo wemfanelo, okuyinto evame kakhulu ancike ochwepheshe ikhamera etholakalayo elihlomile. Nokho, ukwenza leli thuluzi kungenzeka ukuba ngumnikazi, ngesikhathi esifanayo uyokwazi ukulondoloza imali nje kuphela, kodwa futhi ukusungula okwabo. Ngaphambi kokuqala umsebenzi, kudingeka simazi kangcono izidingo ezibalulekile ukuthobela ukuze kuzuzwe umphumela engcono.
umsebenzi wokwenza amalungiselelo
Painting ekamelweni zenziwa usebenzisa uhlu amathuluzi athile kanye nezinto ezibhaliwe. Phakathi kwezinye izinto, kubalulekile ukuthola ekamelweni lapho imishini uzobe elise. Egalaji ingaba njengesihluthulelo kuye. Thenga kakhulu fan ukushisa, uhlelo ukupholisa isibhamu ukushisa. Lolu hlu uyisidingo. Uma ukunweba uhlu ungakwazi ukwengeza iminyango, ventilators, namasango, ukukhanyisa, elawulwa kude nokuningi. Konke kuzoncika nokuzimisela ikhono zezimali. Ikhamera kufanele ezenzekelayo futhi unekhono ukwenza hhayi kuphela imoto noma eminye imikhiqizo staining, kodwa futhi omiswe yabo. Njengoba izingxenye obusebenzayo kuphuma ukupholisa bephoqeleka, okuyinto Ilungiselelwe enezihlungi for ekuhlanzeni emazingeni ehlukene. Lapha kufanele ichasiselwe ekamelweni ukuze staining nokwesula okwalandela, futha ukushisa, iyunithi ezishintshayo. imishini Somuhlwa kufanele usebenzele ukubulungisa isimiso ukuncela futhi babe lemifanekiso emoyeni.
Ukudweba ekamelweni zenziwa ukuhlangabezana nezidingo ezisebenza egumbini. Izindonga kumele kube ukumelana nomlilo, washable futhi engangeni moya ngangokunokwenzeka. Nge izinto ngenhla akufanele abe nobunzima ethile. Izindonga avame ezenziwe ngensimbi futhi avaleke ngcí. izingqimba ezimbili ezokwenza yakha isisekelo uhlelo, udinga ukugcwalisa ukushisa esisindisa ukuphepha impahla. UPawulu, futhi, kudingeka ukugcwalisa, kuncike emithethweni ethile, phakathi kwabo kufanele kwenziwe ingxenye isikhala design usebenzisa izingqimba eziningana ikhava hlupha ezonikeza esidayisa emoyeni. Indaba refractory kufanele yisisekelo esikhundleni kanye nomnyango iminyango, okuyinto ukuvikela imoto kusuka uthuli nezinye izinto ivela emgwaqweni. Yingakho kubaluleke kangaka ukuvuza. Umnyango kufanele kube lula ukuvula, ukuthi kuzoqinisekisa ukuphepha okuyinhloko.
Ukwakhiwa ukukhanyisa izinhlelo
Ukudweba ekamelweni zenziwa ikhumbula ilungiselelo ezifanele ukukhanyisa uhlelo. Ukusetshenziswa izibani Fluorescent anganikeza ukubonakala engcono kanye ukungabikho ukukhanya nezithunzi engadingeki. Ukuze imithetho zobuchwepheshe, ukukhanya luyakusuka 600 1000 lux. Lowo yimpumelelo kakhulu futhi ephumelelayo ukusetshenziswa izibani Fluorescent zazo wahlela ezindongeni ohlangothini kanye ophahleni. Nokho, le ndlela kuhilela ezithile phakathi ukudaya master ngeke babe ukubonakala Ezansi imoto noma sihloko. Ukuze kuqedwe ukukhanya engadingeki kanye nobungako enganele ukukhanya, kumele ibekwe eduze udonga izibani ezinkulu oblong. Ukudweba ekamelweni zenziwa ngesisekelo nezidingo yesikhala samahhala, ozoqinisekisa lula ukusetshenziswa. Musa ukhethe igumbi endaweni engaphansi kuka 4 x 6 amamitha. Ikhamera Kunconywa ngesisekelo ukhonkolo, kodwa kuyafaneleka ukucabangela ukuthi le ndlela eqolo. Ungakwazi iphendukele esinye isixazululo, okubandakanya ukusetshenziswa njengendlela uhlaka metal isizinda. Kumelwe ibekwe ngaphansi phansi valve, isistimu qeda kanye lemifanekiso.
Idivayisi kohlelo ukupholisa
Ukudweba idokodo kufanele abe eliphezulu ukupholisa uhlelo, ngoba ingenye izici eziyinhloko. Uhlelo kumele unikezwe isihlungi ezonikeza umoya ohlanzekile, ekuqedeni upende inkungu sebethule. On ukudayiswa kuyinto eyodwa-injini nezimbili-injini ukufaka. Uhlobo lokuqala iphampa emoyeni zivela phezulu, okuholela inkungu luhlala phansi futhi ngokukhishwa ngembobo. izinjini ezimbili ukunikeza umjovo kanye suctioning emoyeni. Lapho ekhiqizwa Umdwebo ekamelweni, kungenzeka ukunikeza, futhi ukuhlunga emoyeni. Kungcono ukukhetha uhlobo ezimbili-isigaba, imodeli kuyoba elikwazi ukunqaka ukungcola indawo futhi uyokhulula kusukela ezinhlayiyeni ezincane. Kubalulekile ukukhetha uhlelo ukupholisa, izinga komoya ilingana kuka-20 no-25 cm ngomzuzwana.
Ukukhethwa for omiswe spray idokodo
Uma senziwa spray idokodo ngezandla zabo, imidwebo zazo okusesihlokweni esithi, kubalulekile ukuhlinzeka omiswe yayo. Heat-generator, engatholwa emakethe namuhla ukusebenzisa ku samafutha angcolile, igesi kanye nophethiloli. Kuye ikhamera kungenzeka ayethanda izidingo generator amandla ezahlukene, kungashiwo ifakwe i timer okuzenzakalelayo neminye imisebenzi. Ukuze omiswe zaveza izimoto kanye izimpahla ezisetshenziswa kakhulu izibani infrared. Ziyakwazi kulula ukusebenza futhi unikele ngomthelela oyifunayo at kwezindleko zezimali.
Iinsetjenziswa emakamelweni ngamakamelo
Kuyadingeka ukuba aluqede ngokuphelele khona zonke izinhlobo izinto ngaphakathi, elikwaziyo ukuqoqa uthuli. Lezi zihlanganisa ifenisha, okhaphethi, Indwangu izinto namakhona esithambile. Umnikazi ngesikhathi esifanayo ukwazi ukumane nje ukukhiqiza ahlanzekile, ukuhlinzeka isimo evamile isikhala yangaphakathi.
Lapho yokudweba emakamelweni wenza ifenisha, izindonga nophahla ngaphakathi, bavame ukuziqhathanisa ababethi emhlophe. Ochwepheshe batusa ukusetshenziswa powder upende. indlela enjalo kuzoqinisekisa ukuthi umbala ilungile, kodwa futhi kusiza inqubo ukudaya. Kuyinto efiselekayo ukunikeza ikhamera egumbini Umbuso indawo lapho zonke izinto, imishini kanye yokusungula izogcinwa.
Uma senziwa spray idokodo, imiyalelo esihlokweni, ungasetshenziswa sokufeza lezi imisebenzi. Kubalulekile ukulungiselela imishini ukudaywa. Ifanele spray izibhamu ukuthi ongasebenza ngomfutho ophakeme futhi ongaphakeme. Uhlobo lokuqala kuhilela isidingo sokusebenzisa compressor epompa emoyeni ngokudala kwengcindezi staining.
Ngokuphathelene womoya low-ingcindezi amadivayisi, kusebenze umoya onomfutho. Sales kungenziwa ukuthola futhi airless spray izibhamu, okungaba womoya noma kagesi. izimpahla ezibizayo - imishini inhlanganisela sihlanganise uhlobo amadivayisi lokuqala nelesibili. Lezi izinhlelo sihlanganise izici best of the airless nomoya izindlela. Ukudweba idokodo, lapho isithombe is okusesihlokweni esithi kungenzeka ifakwe eyodwa noma amaningi amadivaysi ngenhla. Ochwepheshe batusa usebenzisa imishini airless, ngoba yilona elilungile nalefanele. Kulokhu kusukela isibhamu ngaphansi kwengcindezi ephoqelela kube wafutha upende lacquer izinhlayiya.
Uma kuzodala idokodo umdwebo nge screen amanzi, ungasebenzisa imishini airless okuyinto usindisa izinto consumable for umsebenzi. Uma kuziwa powder ekamelweni, bese usebenzisa i-ke uyokwazi ukulondoloza yokususa ingcekeza elenkani. Lokhu imishini bangasebenza ukusebenza owodwa injini kohlelo ukupholisa, eqinisekisa izinga ebusweni enamathela yomzimba imoto noma omunye umkhiqizo.
Indlela yokwenza i-track isiminyaminya kusuka amabhodlela epulasitiki
Snowblower izandla siqu: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Soundproofing nemengamo ngezandla
Etching kwensimbi ekhaya. Indlela ukubeka isithombe ku yensimbi: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Kanjani ukwakha buggies ixhaphozi ngezandla zabo: imiyalelo
Okokhelekayo briquettes ngezandla zakho: ubuchwepheshe, izinto zokusetshenziswa. Kanjani ukwenza amafutha briquettes ngezandla zakho?
Aleksandra Nevskogo Ibhuloho - jika elide kakhulu
Ikhemisi izimonyo: brand ukubuyekezwa nezilinganiso
Ngo Sochi lolwandle "Albatross", emihle nemibi
Dmitry Bertman, yaseshashalazini umqondisi: Biography, empilweni yakho, umsebenzi
Udweba kanjani Ever lo ngemva Hai ngokwakho
Yenza isaladi nge isitshalo seqanda, futhi utamatisi, noshizi
Imisebenzi yangemva kwesikole - Iyini?
Imisindo yomqhele we-Metal: izici nezinzuzo
Ubumnene: izibonelo isici phlegmatic, sanguine, choleric futhi melancholic
Ukuhlolwa kwegazi nge-hepatitis
Kanjani ukwenza i-slideshow ngomculo?
Indlela ukupheka isoso multivarka?